ninja – Gaming Noodle
Twitch ပေါ်ကို အထူးသီးသန့်စာချုပ်နဲ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ Ninja
[Unicode] Twitch ပေါ်ကို အထူးသီးသန့်စာချုပ်နဲ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ Ninja ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း streamer များထဲက တစ်ဦးဖြစ်သူ Ninja ဟာ Twitch ပေါ်မှာ ပုံမှန် stream ပြန်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သူဟာ Twitch နဲ့ အထူးသီးသန့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုကာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ Ninja ရဲ့ ပုံမှန် stream များကို Twitch ပေါ်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်နေပါပြီ။ ရှေးယခင်နှစ်များမှာတည်းက Twitch streamer တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Ninja ကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၉ သြဂုတ်လအတွင်းမှာတော့ Mixer က ခေါ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Mixer ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းများအတွင်းမှာ အပြီးဖျက်သိမ်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Ninja ဟာ လွတ်လပ်သွားပြီး နှစ်သက်ရာ …
Twitch ပေါ်ကို အထူးသီးသန့်စာချုပ်နဲ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ Ninja Read More »
တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Twitch ပေါ်မှာ stream ပြန်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Ninja
[Unicode] တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Twitch ပေါ်မှာ stream ပြန်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Ninja လက်ရှိဂိမ်းလောကရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး stream များထဲကတစ်ဦးဖြစ်သူ Ninja ဟာ Twitch ပေါ်မှာ follower ပေါင်း ၁၄.၉ သန်းကျော် ရရှိထားသူပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကတော့ Ninja ဟာ Mixer ရဲ့ ခေါ်ယူမှုကြောင့် ယင်းပလက်​ဖောင်းပေါ်ကို ရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးနောက် သူ့ရဲ့ follower များစွာရရှိထားတဲ့ Twitch ချန်နယ်ပေါ်မှာ လုံးဝ stream မလွှင့်တော့ပဲ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုနှစ်လယ်ပိုင်းမှာ Mixer ဟာ လုံးဝဖျက်သိမ်းသွားခဲ့လို့ ယင်းပလက်ဖောင်းပေါ်ကို စာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူထားတဲ့ streamer များဟာလည်း လွတ်လပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ Ninja နဲ့ Shroud …
တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Twitch ပေါ်မှာ stream ပြန်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Ninja Read More »
DrDisrespect Twitch ကနေ ဘာကြောင့် ရာသက်ပန် ban ခံလိုက်ရတာလဲ?
[Unicode] DrDisrespect Twitch ကနေ ဘာကြောင့် ရာသက်ပန် ban ခံလိုက်ရတာလဲ? DrDisrespect ဆိုတာ Twitch ရဲ့ နာမည်အကျော်ကြားဆုံး Streamer တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Follower4သန်းကျော်ရှိနေသူတစ်ယောက်ပါ။ Twitch ပေါ်မှာပဲ exclusively stream ဖို့ ယခုနှစ် မတ်လ ကမှ နှစ်ရှည်စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသူ တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဇွန်လ (၂၆) ရက်နေ့မှာ DrDisrespect ကို Twitch ကနေ Ban လိုက်တယ်လို့ report တွေ တက်လာခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်ထိ Twitch ကနေ တရားဝင်ကြေညာချက် မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ သတင်းထောက်အချို့ရဲ့ စုံစမ်းမေးမြန်းချက်မှာတော့ Twitch ဟာ သူတို့ရဲ့ “Community …
DrDisrespect Twitch ကနေ ဘာကြောင့် ရာသက်ပန် ban ခံလိုက်ရတာလဲ? Read More »
Mixer ကို အပြီးပိတ်သိမ်းပြီး Facebook Gaming နဲ့ ပူးပေါင်းတော့မယ့် Microsoft
[Unicode] Mixer ကို အပြီးပိတ်သိမ်းပြီး Facebook Gaming နဲ့ ပူးပေါင်းတော့မယ့် Microsoft Microsoft ကုမ္ပဏီဟာ ယင်းတို့ရဲ့ streaming ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mixer ကို လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ပိတ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Microsoft ဟာ streaming လောက ကနေ စွန့်ခွာသွားမှာ မဟုတ်ပဲ Facebook နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဦးမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ Mixer ပေါ်က streamer များနဲ့ ကြည့်ရှုသူများကို Facebook Gaming ပေါ်ကို ရွှေ့ပြောင်းသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft ဟာ Twitch, Youtube, Facebook Gaming အစရှိတဲ့ streaming ပလက်ဖောင်းများနဲ့ …
Mixer ကို အပြီးပိတ်သိမ်းပြီး Facebook Gaming နဲ့ ပူးပေါင်းတော့မယ့် Microsoft Read More »
Esports လောကအပေါ် သက်ရောက်မှု များပြားလာနေတဲ့ TikTok
LeaveaComment	/ FEATURES / By Gaming Noodle
[Unicode] Esports လောကအပေါ် သက်ရောက်မှု များပြားလာနေတဲ့ TikTok ယနေ့ကမ္ဘာမှာ Esports ဈေးကွက်ဟာ တစ်နေ့တစ်ခြားကြီးမားလာသလို Esports အသင်းများနဲ့ အဖွဲ့အစည်း များဟာလည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာများကို အသုံးချပြီး မိမိတို့ကို လူသိများလာအောင် ကြိုးပမ်းလာကြပါတယ်။ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ Esports အသင်းအဖွဲ့များဟာ စပွန်ဆာရှာဖွေခြင်း၊ ကြော်ငြာများ လက်ခံခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း စတာတွေကို လွယ်ကူစွာပြုလုပ်ပြီး ဝင်ငွေ ရှာဖွေလာနိုင် ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Esports အသင်းအဖွဲ့များ အသုံးပြုနေကြတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာများထဲမှာ Facebook, Twitter, YouTube နဲ့ Instagram စတဲ့ ပလက်ဖောင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံများမှ Esports အသင်းအဖွဲ့များဟာ Twitter ကို သတင်းအချက်အလက်များ ကြေညာဖို့ အဓိကအသုံးပြုလာကြပြီး YouTube …
Esports လောကအပေါ် သက်ရောက်မှု များပြားလာနေတဲ့ TikTok Read More »
Twitch နဲ့ နှစ်ရှည်စာချုပ် ချုပ်လိုက်တဲ့ Dr.Disrespect
[Unicode] Twitch နဲ့ နှစ်ရှည်စာချုပ် ချုပ်လိုက်တဲ့ Dr.Disrespect အမေရိကန် ဂိမ်း streaming ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twitch ဟာ နာမည်ကြီးဂိမ်း streamer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Dr. Disrespect နဲ့ သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုကို မကြာသေးမီက ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ယင်းစာချုပ်အရတော့ Dr. Disrespect ဟာ သူ stream နေကျ Twitch ပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေ မပြောင်းမရွှေ့ပဲ နှစ်အတန်ကြာ ဆက်လက်ရပ်တည်နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းစာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို အသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေမယ့် Twitch ဟာ Dr. Disrespect ကို များပြားတဲ့ ငွေကြေးပမာဏနဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း အများကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ Dr. Disrespect ဟာ လက်ရှိအချိန် Twitch ပေါ်မှာ follower ၄ …
Twitch နဲ့ နှစ်ရှည်စာချုပ် ချုပ်လိုက်တဲ့ Dr.Disrespect Read More »
Streamer လောကမှာ ဘယ်သူတွေ ဦးဆောင်နေလဲ
[Unicode] Streamer လောကမှာ ဘယ်သူတွေ ဦးဆောင်နေလဲ ဂိမ်းကစားသူအတော်များများဟာ ဂိမ်း stream များကိုလည်း စိတ်ပါဝင်စားစွာ ကြည့်ရှုလေ့ရှိကြပါတယ်။ အချို့ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များဟာ မိမိတို့ ဝါသနာပါတဲ့ဂိမ်းများရဲ့ ကစားပုံ ကစားနည်းများကို streamer တွေဆီက လေ့လာတတ်ကြသလို stream ကို အပျော်တမ်းသက်သက်ကြည့်ရှုသူများလည်း ရှိကြပါတယ်။ သုတေသနတစ်ခုမှာတော့ ဂိမ်းလုံးဝကစားလေ့မရှိပဲ stream သီးသန့်သာ ကြည့်ရှုကြတဲ့ ပရိသတ်များလည်း ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ယခုနှစ်အတွင်းမှာ ဂိမ်း streaming ဟာ ယခင်နှစ်များထက် ပိုမိုခေတ်စားလာခဲ့ပြီး နာမည်ကျော် streamer အမြောက်အများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဂိမ်းအသစ်များထွက်ပေါ်လာမှုနဲ့အတူ နှစ်အတော်ကြာတည်းက ရှိနေခဲ့ကြတဲ့ ဝါရင့် streamer များ ပိုမိုနာမည်ကျော်လာခဲ့သလို တစ်ဟုန်ထိုး လူကြိုက်များလာတဲ့ streamer လက်သစ်များလည်း ရှိလာပါတယ်။ – …
Streamer လောကမှာ ဘယ်သူတွေ ဦးဆောင်နေလဲ Read More »
Adidas နဲ႔ လက္တြဲ႕မယ့္ ပထမဆံုး Esports pro streamer “Ninja”
[Zawgyi] Adidas နဲ႔ လက္တြဲ႕မယ့္ ပထမဆံုး Esports pro streamer “Ninja” နာမည္ေက်ာ္ Fortnite ကစားသမား Ninja ဟာ အားကစားအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Adidas နဲ႔ ပူးေပါင္းေၾကာင္းကို မၾကာေသးမီက ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္ကို Ninja က သူ႔ရဲ႕ Twitter အေကာင့္ေပၚမွာေရးသားခဲ့သလို Adidas ကလည္း သူတို႔ရဲ႕ သတင္းစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။ ဘာေတြကို ပူးေပါင္းျပီး ျပဳလုပ္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက် မေျပာထားေသးေပမယ့္ Ninja x Adidas ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔လာရဖြယ္ရွိပါတယ္။ “ျဖတ္လမ္းဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ရက္ရွည္လမ်ား ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာပါ။ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္မွလည္း သင့္အိပ္မက္မ်ားကို ပ်က္စီးမခံပါနဲ႔။ ကိုယ့္အတြက္လမ္းေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြပါ။ အခ်ိန္ေပးၾကိဳးစားပါ။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ …
Adidas နဲ႔ လက္တြဲ႕မယ့္ ပထမဆံုး Esports pro streamer “Ninja” Read More »
ကံဆိုးေနတဲ့ နာမည္ၾကီး Streamer မ်ား
[Zawgyi] “ကံဆိုးေနတဲ့ နာမည္ၾကီး Streamer မ်ား” နာမည္ၾကီး ဂိမ္း streamer ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Shroud နဲ႔ Ninja တို့ဟာ မၾကာေသးမီက ကံဆိုးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္လုံးဟာ မူလက Twitch ေပၚမွာ လူၾကိဳက္အမ်ားဆုံး streamer မ်ား ျဖစ္ခဲ့ျပီး သိပ္မၾကာေသးမီကေတာ့ Ninja ဟာ Mixer ကို ေရြွ႕ေျပာင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ Shroud ဟာ လက္ရွိမွာ Apex Legends ကစားတာကို အမ်ားဆုံး stream လႊင့္ေလ့ရွိျပီး Ninja ကေတာ့ Fortnite ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ Shroud အတြက္ မၾကာေသးမီက ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ကံဆိုးမႈကေတာ့ သူအသုံးျပဳေနတဲ့ Twitter အေကာင့္ hack …
ကံဆိုးေနတဲ့ နာမည္ၾကီး Streamer မ်ား Read More »
Time မွေရြးခ်ယ္ေသာ ၂၀၁၈ အတြက္ အလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုး လူတစ္ရာစာရင္းမွာ ပါလာတဲ့ Ninja
ကမ႓ာေက်ာ္ Streamer တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Ninja ဟာ Time Magazine ရဲ႕ ဒီႏွစ္အတြက္ The 100 Most Influential People စာရင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ Time Magazine ဟာ The 100 Most Influential People စာရင္းကို 2004 ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တကမ႓ာလံုးမွာ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္ၿပီး အလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုး လူအေယာက္ ၁၀၀ ကို ေရြးထုတ္ ေဖာ္ျပေနတာပါ။ ထိုစာရင္းမွာ အႏုပညာရွင္ အတက္ပညာရွင္ေတြအျပင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကိုပါ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တုန္းက ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီႏွစ္အတြက္ TIME 100 စာရင္းမွာေတာ့ Streamer “Ninja” …
Time မွေရြးခ်ယ္ေသာ ၂၀၁၈ အတြက္ အလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုး လူတစ္ရာစာရင္းမွာ ပါလာတဲ့ Ninja Read More »